शब्दकोश: लुभूमा लभगुरुहरूसँग
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, August 06, 2008
दीपक जडित August 06, 2008
यस्तो छोटो यात्राको पनि यति मिठो बर्णन । अहो! कस्तो रमाईलो पारेर लेख्नुभएको ।
Yatra ko ramro barnan garnu bhayeko rahecha.
Padher samye biteko pattai bhayen.
२-३ घन्टाको यात्रा-वर्णन घरपछाडिको धारोमा गाग्री भरेर ल्याएजस्तै थियो । तर पनि आत्मीय वसन्तजी र भरतजीले मन पराइदिनुभयो । पल-पल जिन्दगी नै यात्रा हो, लेख्न र रोमाञ्चकता समात्न सक्ने दृष्टि भएमा दिनदिनैको नै नियात्रालेख बन्दो हो । तर त्यस्तो फुर्सद र सूक्ष्म दृष्टि घोट्ने हामीमा धैर्यता नै कहाँ ?? धन्न साथीभाइबहिनीले हौस्याउँछन् र झुक्किएर वर्षमा एकाध पटक डाँडा-कन्दराको जोखाना हेर्न सुर कसिन्छ । फेरि पनि त्यसरी नै 'झुक्किने' मौका मिलेमा अनुभवको झोक्का को CaFe को मेनूमा पस्किने नै छु । हुटहुटीको लागि धन्यवाद छ है !
Basanta Gautam August 12, 2008
सुन्दर वयान गर्नुभएको छ धाइबाजी आफ्नो यात्राको! नेपाल त्यसै-त्यसै रसिलो, रमाइलो र सुन्दर छ। तपाईँको सुन्दर वयान सुनमा सुगन्ध बनेको छ।
अब दुबै हातमा जोडी स्याउ बोक्ने मेसो पनि अगाडि बढोस् भन्ने कामना:)